June 25, 2019 puntlandnews 0
June 24, 2019 puntlandnews 0
DAAWO-Madaxweynaha Puntland oo isugu yeeray Gen Moorgan iyo khuburadii dhanka ciidanka.
June 24, 2019 puntlandnews 1
Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa maanta qasriga madaxtooyada ee Garoowe ku qaabilay masuuliyiin xilal ka soo qabtay Puntland, saraakiil kala duwan ee dhanka ciidanka ah, waxaana ka dhex muuqday General Maxamed Xirsi Moorgan. DAAWO
DAAWO-Dhaqankii Reer guuraaga Soomaaliyeed oo dhammaad ku dhow wuxuu marayaa in Jaariyad la dalbado.
Puntlanndews.net (Garoowe)-Ku soo dhowaada barnaamij gaar ah iyo waraysiyo xiiso badan oo ku saabsan dhaqankii Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer guuraaga ah, waxaana aan ku waraysanaynaa ruug cadaayo muddo soo joogey, wuxuuna marayaa in reer […]
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/XKQ/222/1-330/062019, uu Xilka qaadis, bedel iyo Magacaabid ku sameeyey xubno ka mida xukuumadda. Waxaanay u dhignayd Wareegtada Madaxweynuhu Sidan:- Wareegto Madaxweyne UJEEDDO: XIL […]
Odayaasha Caddaado oo kulan ka yeeshay haddii Xaaf uu imaan karo magaalada & go’aan laysku raacay.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa maanta waxaa ka qabsoomay kulan ay yeesheen odayaasha iyo waxgaradka magaaladaasi loogana hadlayey haddii Xaaf loo ogolaan lahaa inuu yimaado Cadaado. Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxa […]
DAAWO-Faroole oo Garoowe kaga dhawaaqay inuu furanyahay xisbigii Horseed uuna doorasahda Puntland u…
June 24, 2019 puntlandnews 2
Puntlanndews.net (Garoowe)-Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa xalay Garoowe ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa qaadatayna in ka badan 30 daqiiqo. Khudbaddaan ayaa waxa uu kaga hadlay aasaaskii Puntland, mudadiisii xil […]
DAAWO-Qaabkii loo diyaariyey afgembigii Itoobiya, cidda ka dambaysay, xildoonayaasha iyo qaabkii uu u fashilmay.
Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in Maalin baroordiiq ah loo sameynayo madaxdii Maalin ka hor lagu dilay isku daygii afgembi ee ka dhacay gobolka Amxaarada ee dalkaasi Itoobiya. Madaxda Afgebiga dhicisoobay lagu dilay ayaa waxaa ka […]
Ciidamo la wareegey Dhuusamareeb iyo Khayre oo ku wajahan xilli madaxweyne Xaaf uusan…
Maanta ayaa la filayaa in Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ahna Xarunta Maamulka Galmudug inay gaaraan Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. Shalay gelinkii dambe ayaa waxaa Dhuusamareeb gaarayu […]
DEG DEG-Cabsi taagan xilli Puntland ay magaalada Garoowe kaga dhawaaqday..
Puntlandnews.net (Garoowe)-Kadib markii dhowaan madaxweynaha Puntland uu magacabay Gudi ka kooban wasiiro una Magacaabay qiimaynta fatahaadi ay samaysay badda degmadda Caluula ee gobalka Gardafuu ayaa maanta shir jaraa’id ay ku qabteen Garoowe. Xubnaha guddigaan oo […]
AKHRISO-Xaaf oo shaaciyey inuu burburay heshiiskii Ahlusuna kuna dhawaaqay doorasho cusub.
Qoraal uu soo saaray Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaaf ayuu ku shaaciyay in uu buray heshiiskii horay u dhexmaray Maamulkii gobolada Dhexe ee Ahlusunna iyo Maamulka Galmudug iyo in uu ogolaaday inay […]
XOG-Xagee caawa ku sugan yahay madaxweyne Xaaf Maxaase kajira in Puntland ciidan u dirtay si ay u soo badbaadiyaan.
June 23, 2019 puntlandnews 2
Puntlandnews.net (Nairobi)-Madaxweynihii Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo ciidamo uu hogaaminayo ayaa isaga baxay magaalada Dhuusamareeb kadib markii uu amarkiisu ka shaqayn waayey isla markaana uu heshiiskii uga baxay maamulka Ahlusuna Wal-jameeca. Madaxweyne Xaaf oo […]
Mid Kamid ah masuuliyiintii ugu saraysay Puntland oo geeriyoodey iyo MD Denni oo ka tacsiyeeyey.
June 23, 2019 puntlandnews 0
Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Puntland Yuusuf Xaaji Nuur ayaa Ku geeriyoodey dalka Turkiga. Alle ha u naxariistee Marxuumku waxa uu Soomaaliya kasoo qabtay Xilal kala duwan, waxa uu ahaa masuulkii ugu horeeyey ee loo magacaabo […]